प्रकाश दाहालमा तुरुन्तै निर्णय लिनसक्ने क्षमता थियो : जोखबहादुर महरा
उहाँ एक व्यवहार कुशल युवा नेता हुनुहुन्थ्यो । आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरुलाई सम्मान, सहयोद्धाहरुसँग घनिष्ट, जुनियरहरुलाई माया, तुरुन्तै निर्णय लिनसक्ने र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता उहाँमा रहेका विशिष्ट गुणहरु हुन् । उहाँसँग सहकार्य गर्ने जो कोही प्रभावित भइहाल्थ्यो, सबैले उहाँलाई भित्रैदेखि माया गर्दथे ।
– जोखबहादुर महरा, स्वकीय सचिव, अध्यक्ष प्रचण्ड
नेपाली क्रान्तिका एक उदयमान तारा क. साकार दाहाल ‘प्रकाश’को असामयिक निधन भएको मंसिर तीन गते एक वर्ष पुग्दैछ। स्मृति दिवसको यस क्षणमा म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गर्दछु। कमरेड प्रकाशसँग अध्यक्ष क. प्रचण्डको निजी सचिवालयमा रहेर लामो समय सहकार्य गरेँ। उहाँसँगको सहकार्यका अनुभूति छोटो रुपमै भए पनि उल्लेख गर्ने जमर्को गर्दैछु।
प्रकाश वैचारिक दृढता, राजनीतिक स्पष्ट्रता र संगठनात्मक रुपमा तुरुन्तै निर्णय लिनसक्ने एक जुझारु युवा नेता हुनुहुन्थ्यो । नेपाली क्रान्तिलाई बुझ्ने र पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँ सधै अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो । विवेक र साहसले भरिपूर्ण रह्यो उहाँको क्रान्तिकारी जीवन । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिलाई पनि सहज ढङ्गले सामना गर्ने साहस थियो । प्रकाश महान् जनयुद्धको समयमा पार्टीका दस्तावेज, परिपत्र, फोटोग्राफी, अडियो भिडियोहरु लगायत सामाग्रीहरु तयार पार्नेजस्ता कठिन जिम्मेवारीहरुदेखि व्यवस्थापकीय काम सहज ढङ्गले पूरा गर्नुहुन्थ्यो । देश विदेशका समाचारहरु संकलन गर्ने सुचना र सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता जिम्मेवारी निक्कै परिपक्वताका साथ पुरा गर्नु हुन्थ्यो । देश विदेशका समाचारहरु सङ्कलन गर्ने, सूचना र सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता जिम्मेवारी निक्कै परिपक्वतासाथ पूरा गर्नु हुन्थ्यो । बेलाबेला अध्यक्ष कमरेडले हामीलाई जिम्मा दिनुहुन्थ्यो, हामी दुवैको बुझाइमा एकरुपता थियो ।
उहाँ एक कुशल संगठक हुनुहुन्थ्यो । संगठनात्मक काममा उहाँ निक्कै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । पार्टी कमिटीका मिटिङ, सैन्य संगठनका मिटिङहरुमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरु निक्कै गम्भिर र मार्मिक हुन्थे । संगठनमा देखिएका, सहयोद्धाहरुमा देखिएका समस्यालाई प्रकाश स्पष्टसँग राख्नुहुन्थ्यो । अरुका कमजोरीलाई देखाउन सक्ने र आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकार गर्नसक्ने बलियो क्षमता थियो । संगठनका गोपनियता, अन्तरसङ्घर्ष र दुईलाइन सङ्घर्षको गहिरो ज्ञान उहाँमा थियो । पार्टीबीच चल्ने ठूल–ठूला वैचारिक राजनीतिक बहस, छलफल र सङ्घर्षलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा गहिरो अध्ययन गर्नुभएको थियो । त्यसैले पार्टीभित्रको गम्भिर दुईलाइन सङ्घर्ष, भीषण वर्ग सङ्घर्ष एवं राजनीतिक सङ्घर्षको भट्टीमा खारिदै आउनुभएको थियो प्रकाश । उहाँले आफूलाई एक अथक योद्धाको रुपमा स्थापित गरिसक्नुभएको थियो ।
प्रकाश अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोरा मात्र नभएर एक क्रान्तिकारी योद्धा र कार्यकर्ता हुनुहुन्यो । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई केवल बाबुको रुपमा मात्र नभएर पार्टीको सर्वोच्च नेता र सुप्रिम कमाण्डरको रुपमा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । ‘सर्वोच्च नेता, उहाँ हाम्रो जहिले पनि सर्वोच्च नेता, सुप्रिम कमाण्डर, उहाँ सफल हुनुपर्दछ, यसले मात्र सिङ्गो पार्टी, क्रान्ति सफल हुन्छ’ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो प्रकाश । उहाँ सफलताका निम्ति सधैं प्रयत्नशील हुनुहुन्थ्यो । जन्म दिने आमालाई केवल आमाको रुपमा मात्र नभएर सिङ्गो पार्टीको अभिभावकको रुपमा लिनुहुन्थ्यो । पलपलमा आमाबाट सल्लाह, सुझाव लिइरहनुहुन्थ्यो । घर परिवार सम्पूर्ण रुपले पार्टी र क्रान्तिमा होमिएको परिवार भएकाले परिवार बीचमा पनि कमरेडहरु बीचमा हुने सम्बन्ध र व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो ।
हामी दुईबीच विचार, भावना र व्यवहारको हिसाबले निक्कै सामिप्यता थियो । हाम्रो बीचमा वैचारिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, भावनात्मक छलफल हुने गर्दथ्यो । उहाँको युवा अवस्थामै परिपक्वताले निक्कै उत्साहित बनाउँथ्यो । युवाहरुमा यस्तै आत्मविश्वास, पार्टी, क्रान्ति र नेतृत्वप्रतिको आत्मियताका साथ हुने व्यवहारले नेपाली समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भएको हो । उहाँसँगको सहकार्यले जीवनमा सधैं उर्जा मिलिरहन्थ्यो ।
अध्यक्ष कमरेड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा परिस्थिति निक्कै जटिल थियो । संविधान कार्यान्वयन, तीनै तहमा निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण, स्थिरता व्यवस्थापन, जनताका आकाङ्क्षाहरुलाई सम्वोधन, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हार्दिक र सुदृढ सम्बन्ध, विकास आयोजनाहरुको कामलाई दु्रतता, आर्थिक समृद्धिजस्ता कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामू थिए । यी सबै काममा प्रकाशको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमियौं । अध्यक्षले चितवन क्षेत्र नं.–३ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नु त छँदै थियो, वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पनि देशैभरि विजयी बनाउनु थियो । हामी निर्वाचनको चुनावी सभाका लागि झापामा थियौं । उहाँ निर्वाचनकै तयारीका लागि काठमाडौं आउनु भयो । काठमाडौं रहेकै बेला हृदयघातका कारण उहाँको आकस्मिक निधन भयो ।
कमरेड प्रकाशको निधनले सिङ्गो पार्टीलाई अपुरणीय क्षति भएको छ । अहिले भौतिक रुपमा प्रकास हामीमाझ हुनुहुन्न । तर, उहाँका विचारहरु, भावनाहरु हामीसँग सधै रहिरहनेछन् । कमरेड प्रकाशलाई हामी सधै सम्झिरहनेछौँ । उहाँका सपना पूरा गर्न हामी सधैं तत्पर रहिरहनेछौँ । हामी अध्यक्ष क. प्रचण्ड र क. सीता दाहाललाई छोराको अभावको अनुभूति हुन दिनेछैनौं । हामी करोडौँ छोराहरु उहाँको वरिपरि रहिरहनेछौँ । नेपाली क्रान्ति र नेपाली जनताको हृदयमा कमरेड प्रकाश हामीमाझ रहिरहनु हुनेछ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली कमरेड प्रकाश ।
Tagsजोखबहादुर महरा प्रकाश दाहाल